Roadrunner App Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama zazalahy mandefa, miverina miaraka amina rindrambaiko Android ho anao rehetra izahay, izay fantatra amin'ny hoe Roadrunner App. Io no fampiharana Android tsara indrindra ho an'ny zazalahy mandefa, izay manome ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fotoana ary ny maro hafa.
FoodPanda dia iray amin'ireo mpanome tolotra fanaterana sakafo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Manolotra serivisy any amin'ny firenena 50 mahery izy io. Izy io dia manolotra vokatra sakafo haingana sy tsara ho an'ny mpanjifa eo am-baravarana. Tsy manome trano fisakafoanana manokana na rafitra fanaovana sakafo.
Izy io dia rafitra fandefasana entana tsotra, izay ahafahanao mahazo ny sakafo tianao indrindra amin'ny trano fisakafoanana tianao. Manome serivisy hafa ho an'ny mpampiasa izy io, fa ny serivisy lehibe kosa dia mifandraika amin'ny sakafo hatrany. Ka ny zava-dehibe indrindra dia ireo zazalahy mpizara, izay manatitra ireo vokatra eo am-baravaran'ny mpanjifa.
Zava-dehibe ny fitantanana azy rehetra indray mandeha. Noho izany, manolotra an'ity rindranasa Android ity izy, izay ahafahan'ny mpiasa tsirairay mitantana ny zava-drehetra momba ny serivisy. Noho izany, raha te hahalala momba an'ity fampiharana ity ianao dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary hahitanao ireo fiasa mahavariana rehetra an'ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny App Roadrunner
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Foodora. Manome vaovao tsara indrindra ho an'ny mpiasa izany, indrindra ho an'ny mpihazakazaka. Izy io dia manolotra ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fitantanana ny fanovana, ny fotoana ary ny hafa.
Ny fitantanana ny fotoana dia iray amin'ireo antony lehibe amin'ny serivisy fanaterana satria ny mpiasa tsirairay dia tokony ho vonona amin'ny fotoana tonga lafatra. Na dia kajy iray tsy hita aza dia mety hiteraka fatiantoka lehibe. Noho izany, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity, dia misy ny vintana kely indrindra amin'ny fitantanana ny fotoana.
Road Runner Apk dia manome ny mpiasa hisafidy ny fotoana araka ny fandaharam-potoana. Izy io dia manome ny serivisy ho an'ny mpitaingina rehetra amin'ny fanaovana fandaharam-potoana mandritra ny fito andro manaraka. Rehefa voahidy ny fandaharam-potoana dia tsy maintsy maka fotoana samihafa ny mpitaingina hafa araka ny fotoana malalaka ananany.
Ireo mpitaingin-tsoavaly dia tsy afaka maka ny fotoan'ny hafa, mandra-panovin'ilay mpitaingina ny fotoana hafa. Ny fanovana fotoana dia fomba iray hafa hanitsiana ny lesoka nataonao. Raha misy mpitaingina mitaingina fotoana tsy mety nefa manamarina aorian'ny fanidiana ny fandaharam-potoana. Noho izany, io mpitaingin-tsoavaly io dia afaka miova fotoana.
Ho hita amin'ny mpitaingina hafa ny fotoam-panakalozana ary raha misy maka izany araka ny fandaharam-potoana, dia afaka amin'io fiara io ianao raha tsy maintsy mamita ny asanao amin'io fotoana io. Iray amin'ireo olan'ny orinasa izany. Noho izany, fomba tsara hitantanana ny fotoananao indray mandeha.
anarana mpandeha an-tongotra
Anaran'ny fonosana com.foodora.courier
Misy endri-javatra marobe amin'ity fampiharana ity ho an'ny mpiasa rehetra. Ka raha mpiasan'ny Foodpanda ianao dia alaivo ity fampiharana ity ary mahazo tombony amin'izany. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ny rehetra izahay.
Safidio ny fiovana
Aza mampiasa afa-tsy amin'ny fampiasana
Manana fampiharana Android mitovitovy amin'izany izahay manantena fa tianao izany.
Tsy misy izany ao amin'ny Google Play Store, fa hizara ny rakitra Roadrunner Apk izahay. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eto amin'ity pejy ity. Mila manery fotoana iray ianao amin'ny bokotra fampidinana ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova fanovana vitsivitsy ianao, alohan'ny fizotry ny fametrahana. Mba hanaovana izany, mandehana amin'ny tontonana Settings and Open Security, avy eo Checkmark 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita io dingana io dia afaka mametraka azy eo amin'ny fitaovanao ianao.
Roadrunner App no ​​fampiharana tsara indrindra ho an'ny zazalahy mandefa hitantana ny fotoanany sy hanome ny tsara indrindra azony. Noho izany, sintomy ity fampiharana ity ary mahazoa tombony amin'ireo serivisy maimaimpoana ireo. Raha manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary zahao ny tranokalanay ho an'ny fampiharana mahavariana kokoa.
Sokajy Apps, famokarana Tags Road Runner Apk, Roadrunner Apk, App Roadrunner Post Fikarohana
KineMaster Pro Apk Download Tsy misy marika [2022 Mod]